ကျူးကျော်သစ် များ၏ နောက်ကွယ် | ဧရာဝတီ
ကျူးကျော်သစ် များ၏ နောက်ကွယ်
နန်းဆိုင်နွမ်| February 19, 2013 | Hits:9,592
10 | | ဖုန်တလူလူ နေပူပူထဲတွင် ၀ါး၊ ဓနိများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တဲအိမ်သစ်များ ဆောက်လုပ်နေကြသည်မှာ ပွဲဈေးတန်းတခု အစပြုတော့မလားဟု မြင်မိသည်။ တဲအိမ်သစ်များက တထောင်ကျော်ခန့် ရှိမည်။
တလကျော်ကာလအတွင်း အိမ်ခြေတထောင်ကျော် ဝင်ရောက် ကျူးကျော် နေထိုင်နေကြသည့် ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် ပီမိုးနင်းလမ်းသို့ ရောက်ရှိသွားသည့်အချိန်တွင် ကျူးကျော်သမားများ ဝိုင်းအုံလာပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေသည်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရိုက်သွားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ပြန်ဖျက်ခိုင်းခြင်း၊ တချို့ကျူးကျော်သမားများက ပိုက်ဆံတောင်းခြင်း၊ အုပ်စုလိုက် မေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။
“ကျမတို့ အိမ်ပုံတွေကို ဖျက်ပေးပါ။ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ကျမတို့ အိမ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာက လာဖျက်တယ်။ ညဆိုရင် အိပ်လို့မရဘူး။ ကျမတို့ရှေ့မှာ ဖျက်ပါ” ဟု ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် အသက် ၄၀ ခန့်အရွယ် အမျိုးသမီးက ဆိုသည်။
ထိုနေရာတွင် တဲအိမ်များ ဆောက်ရန်အတွက် ၀ါး၊ ဓနိများနှင့် ပလပ်စတစ် ကြိုးများ၊ ရေများ ရောင်းချနေသည့် ဈေးဆိုင်များကို တွေ့ရသည်။
“ကျူးကျော်တွေက အရင်တုန်းက ၅၀ ကျော်၊ အခုဆိုရင် ညတွင်းချင်း တထောင်ကျော်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ၀ါး၊ ဓနိ ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ တကယ်ကို သူဌေးဖြစ်သွားတယ်” ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကျူရှင်ဆရာတဦးဖြစ်သူ ဦးနေဧလူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကျူးကျော် သမားများသည် ကျောချစရာ နေရာ တနေရာ ရလျှင် ကျေနပ်ကြောင်း၊ နေစရာ နေရာမရှိသောကြောင့် ကျူးကျော် ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသော်လည်း ယခု လက်ရှိ ကျူးကျော်နေသည့် နေရာမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ် ကတည်းက စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းထားပြီး မြေနေရာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က ကျူးကျော်သူမရှိခဲ့ဘဲ ယခုကာလမှ လာရောက် နေထိုင် ကြသည်မှာ စဉ်းစားစရာ ရှိကြောင်း ၎င်းဆိုသည်။
ကျူးကျော် တဲအနီးတွင် ကွမ်းယာဆိုင်နှင့် ကော်ဖီအအေး တွဲရောင်းချနေသည့် အသက် ၃၀ ကျော် အမျိုးသားက “ကျနော်က ၆ ရပ်ကွက်ထဲကပါ။ ဒီကလူတွေ ဘယ်ကနေလာလဲ ဆိုတာတော့မသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ ဒီမှာ စီးပွားလာရှာဖို့ တဲထိုးတာပါ” ဟု ဆိုသည်။
၁၈ ဧက ၀န်းကျင်ခန့် အကျယ် မြေပေါ်ရှိ ကျူးကျော်တဲ တထောင်ကျော်အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကွမ်းယာဆိုင် ၄၊ ၅ ဆိုင်ခန့် ရှိပြီး ရေများကိုလည်း ပုံးကြီး တပုံးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချနေသူများ ရှိသည်။ ထိုနေရာသို့ သူစိမ်းများ လာရောက် ကြည့်ရှုလျှင် အုပ်စုလိုက် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။
“ဒီကျူးကျော်တွေက လွန်တယ်ဗျာ၊ ကိုယ့်နေရာလည်း မဟုတ်ပဲ လာပြီး တဲဆောက် ပြီးတော့ စည်ပင်တွေ၊ ရဲတွေကိုလည်း ရိုက်တယ်။ ဒါကို ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်” ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အငှားယာဉ် ပြေးဆွဲနေသည့် ကို သန်းနိုင်က ပြောသည်။
စီမံကိန်း မြေများကို ယခုကဲ့သို့ ကျူးကျော်ခြင်းများ မကြာခဏ ပြုလုပ်နေကြခြင်းမှာ အစိုးရက စီမံကိန်း လုပ်လျှင် မြေဂရမ် အသစ်ပေး၍ မြို့သစ် တည်ထောင်ပေး နိုင်သည်ဟု အထင်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့၊ ထိုကျူးကျော်သူ များထဲတွင် အိမ်ပိုင်ရှိသူများ၊ ငွေရှိသူများလည်း ပါနေသောကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ဤကဲ့သို့ ကျူးကျော်နေထိုင်ကြသူများက မိုက်ကြေးခွဲသည့်ပုံစံ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကိုသန်းနိုင်က သုံးသပ်သည်။
“အခုဆိုရင် ကျူးကျော်တဲတွေ ဆောက်မှာကြောက်လို့ လှိုင်သာယာမှာ ရှိတဲ့ စီမံကိန်းမြေကွက်တွေ အားလုံး သွပ်ပြားနဲ့ ပတ်ပတ်လည် ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားရတယ်။ အဲဒါတောင် ဟိုတနေ့က ကျူးကျော်တဲ သွားဆောက်တဲ့ သူတွေ ရှိသေးတယ်” ဟု ကျူရှင်ဆရာ ဦးနေဧလူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လှိုင်သာယာတွင် ကျူးကျော်ပြဿနာများ ယခုရက်ပိုင်း မကြာခဏ ကြားနေရကြောင်း၊ လှိုင်သာယာတွင် နေထိုင်သူများ အနက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ရောက်လာသည့် လက်လုပ်လက်စားများ အလွန်များကြောင်း၊ ယခင်က ၁၀ ပေ ပတ်လည် အခန်းတွင် အဆောင်ငှား နေထိုင်ကြရာ အဆောင်ရှင်များက လစာ မကြာခဏ တိုးတောင်းမှုကြောင့်လည်း ကျူးကျော် နေထိုင်မှုများ ဖြစ်လာကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လှိုင်သာယာ မြို့နယ်တွင် ဒေသအသီးသီးမှ လက်လုပ်လက်စား လူမျိုးစုံ များသည့်အတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြဿနာ ရှိနေကြောင်း ဦးနေဧလူက ထပ်မံဆိုသည်။
“ဒီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေက ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလာကြသလဲ ဆိုတာတော့မသိဘူး။ အဆောင်ငှားရမ်းခ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မြေလွတ်တဲ့နေရာကို တဲလာထိုးနေတာ၊ ဖယ်မပေးနိုင်ဘူး။ ကြိုက်တာလုပ်” ဟု တဲအသစ်ထိုးကာ ကျူးကျော် နေထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လက်ရှိ အချိန်ထိ သက်ဆိုင်ရာမှ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းမှု ပြုလုပ်ရာတွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော ရဲများရှေ့၌ပင် ရှင်းလင်းသူများကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက် နေရာယူထားသူများက ရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း ရှာဖွေနေကြောင်း လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ဒီစီမံကိန်းနေရာကို ဇန်န၀ါရီလက လာရောက်ပြီး ကျူးကျော်နေထိုင်တယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက် ညမှာဆိုရင် ၀ါးတွေကို ကားသုံးစီလောက် တင်ပြီး လာချတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင်တော့ နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်တဲ့သူ၊ အားပေးတဲ့ သူရှိနိုင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းသို့ ကျူးကျော် နေရာယူထားမှုများမှ ကျန်ရှိနေသည်များကို ဖယ်ရှားရန် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတို့က အချိန်ပေးခဲ့သော်လည်း ဖယ်ရှားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က တဲဆောက်သူများနှင့် တဲပြန်ဖျက်သည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား အပြန်အလှန် ပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၎င်းနောက်မှစ၍ ကျူးကျော် ၀င်ရောက် တဲထိုးသူများကို ဖျက်သိမ်းစေခြင်း မလုပ်ဆောင်တော့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းတွင် နယ်အသီးသီးမှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေထိုင်သည့်လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပြီး တိုးပွားလာသည် လူဦးရေအတွက် အစိုးရ အနေဖြင့် မြို့ပြစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ကျူးကျော် များလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားများ လုပ်အားခ နည်းပါးသဖြင့် အဆောင်ငှားရမ်းခ မတတ်နိုင်သောကြောင့် မြေလွတ်သည့် နေရာများတွင် ၀င်ရောက်ကျူးကျော်၍ တဲအိမ် ဆောက်လုပ် နေထိုင်ကာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားလာကြောင်း လှိုင်သာယာ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် ဒေသခံ အမျိုးသားတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ သန့်ရှင်းသာယာ လှပရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့ အိမ်ယာ စီမံကိန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ် စေလိုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်က လမ်းညွှန်ထားပြီး ယင်း ပြည်သူ့အိမ်ယာ စီမံကိန်းတွင် ရတနာ ပြည်သူ့အိမ်ယာ စီမံကိန်းနှင့် ဧရာဝဏ် ပြည်သူ့အိမ်ယာ စီမံကိန်းတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကာ တိုက်ခန်းပေါင်း ၁ သောင်းကျော် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၄၅ မြို့နယ်၌ ၄၄ မြို့နယ်တွင် ကျူးကျော် နေထိုင်သူများ ရှိနေကာ မြို့နယ်တိုင်းတွင် ကျူးကျော် ဆိုင်ခန်းများ မပါဘဲ အနည်းဆုံး ကျူးကျော် တဲ၊ အိမ်၊ အဆောက်အဦး ၅ ပုံ ၁ ပုံစီခန့် ရှိနေကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥပဒေ ကော်မတီမှ ခန့်မှန်းခြေ အတည်ပြုထားသည်။ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် (ဂရမ်မြေ) နေရာ အစားပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥပဒေ ကော်မတီဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်း စီစဉ်လျှက်ရှိသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကျူးကျော်သူများကို ဂရမ်မြေ အစားထိုးပေးမည်ဆိုသည့် သတင်းထွက်ပေါ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စီမံကိန်း နယ်မြေ တချို့၌ ကျူးကျော်အိမ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က မြို့တော် စည်ပင်နယ်နိမိတ် အတွင်း ဖြစ်သည့် မြရည်နန္ဒာနှင့် အောင်သာယာ ရပ်ကွက် ၁၅ ဧကရှိ ကျူးကျော်တဲ ၄၅၄ လုံးကိုလည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က ကံကြီးကုန်း ကျေးရွာနှင့် ဇီးအုပ် ကျေးရွာရှိ မြေကွက် ၂၀၀၀ ကျော်တွင် နေထိုင်သည့် ကျူးကျော်တဲ ၅၅၄ လုံးကို လည်းကောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်က ၀င်ရောက် ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အတွင်းရှိ စည်ပင်ပိုင်မြေနေရာတွင်လည်း မကြာသေးခင်က လပိုင်းအတွင်း ကျူးကျော် အိမ်သစ်များ၊ ခြံကွက်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကို သွားရောက်ဖြေရှင်းသည့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျူးကျော်သူများ အကြား ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
ဒုစရိုက်သမားတွေ ပျော်တဲ့ မြို့မူဆယ်
အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေးစနစ် အားနည်းနေသေး
ဗျူရိုကရက် ကောင်းတွေ အလိုရှိသည်
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Sunshine February 19, 2013 - 12:12 pm	This is what lawlessness is all about. How do they get the land? Nobody owned the land in the past or what?
Reply	ml February 20, 2013 - 3:43 am	ဒါက လူအုပ်စုနဲ့ ရမ်းကား မတရားနေရာယူတာပါ။ အင်အားသုံးဖယ်ပြီး ကျူးကျော်တွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်တွေ ပေးသင့်ပါတယ်။
Reply	angel February 20, 2013 - 12:45 pm	ရဲတွေကလည်းဒါမျိုးကြတော့လက်စွမ်းမထက်ကြတော့ဘူး။ လက်ပန်းတောင်းတောင်
Reply	kumudra February 20, 2013 - 4:39 pm	These lawless people will use the words such “democracy” or “human rights” if Government takes action.
Government should not allow too.
Evenif they will be given lands as substitution, they will sell and do it again coz probably some of them got in the past but sold out and do again.Many stories like that.
Their action are destroying our effort to democracy.
Wait and see, there must be someone/something behind.
Reply	kyaw kyaw February 22, 2013 - 11:29 pm	ဘာလုပ်သင့်လဲ ? ဘာဖြစ်သင့်လဲ ? ဘယ်လိုဖြေရှင်း မလဲ ? စိတ်ဝင်စားတာကတော့ အမှန်ပဲ။ မြင်နေတာကတော့ ဒီကနေ့ နာမည်ကြီး ပါတီတွေမှာ ဒီလိုလုပ်စားဖို့ ချောင်းနေတဲ့ လူမိုက်တွေ ၊ ထောင်ထွက်တွေ ၊ အဲဒီလို လုပ်လိုက်မိတဲ့ ကျူးကျော်တွေ အပေါ်မှာလည်း ကယ်တင်ရှင် ပုံစံမျိုးနဲ့ ရသလောက် ချူစားသွားတာမျိုးတွေ နေ့တဓူဝတွေ့နေရတာပဲ။ မြေသိမ်းခံရလို့ အဲဒီ လူတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီး အလှူငွေ ၊ ထမင်းထုတ် တွေကို (၈၈)အဖွဲ့က ဆိုပြီး တံဆိပ်တွေတပ် ရသလောက် ယူသွားပြီး မဖြစ်စလောက်သွားပေးပြီး ကျန်တာကို ဝေစားနေတာတွေလည်း တွေ့နေရတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေကလည်း (၈၈)ဆို ကယ်တင်ရှင်လားလို့ ထင်နေကြတာ၊ တကယ်တော့ အဲဒီဆင်းရဲတဲ့သူ စာမတတ်သူတွေကို ရသလောက် လိမ်စားနေကြတာတွေပါပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်နေသလဲဆိုတာသာ စဉ်းစားပြီး ခုတည်းက မင်းမဲ့စရိုက်စီ ဦးမတည်ဖို့ ၀ိုင်းထိန်းကြဖို့တော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို နားလည်စွာနဲ့ တာဝန်တွေပေးအပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်မဟုတ်ရင် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် ကနေ နှစ်တစ်ရာကျော် ကျွန်စနစ် အဲဒီကနေ ခေတ်စနစ်တွေ ခုန်ကျော်လို့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ဟော ခုန်ကျော်ပြီး ခု ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတာကို နေ့ချင်းညချင်းရောက်လာတော့ သူများနိုင်ငံလိုတခုချင်း မပြောင်းပဲ ပြည်သူတွေကို အတင်းအကျပ် ဇွတ်ဖန်တီးနေသလို ဖြစ်ပြီး အူကြောင်ကြောင် တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။ ဒီတော့ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုနဲ့နေခဲ့နေခဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို ဖြစ်သင့်တာလောက် ကစပြီးပဲ ပြောင်းဖို့ လုပ်ကြပါ။ အတင်းမတိုက်တွန်းကြပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ။
Reply	ကောင်းစေချင် March 2, 2013 - 8:00 am	ကိုကျော်ကျော်လို အမှန်အတိုင်းတွေးခေါ်နိုင်တဲ့commentတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ angelဆိုတဲ့
တယ်။ နေစရာနေရာဆိုတာ အလားကားမရဘူး။ လူတိုင်းကိုယ့်အိမ်ယာရဖို့ ကိုယ်တိုင်ကျိုးစား
သမာသမတ်ကျတဲ့အလုပ်လား။ အဲလိုသာရစတမ်းဆိုရင် ပန်းခြံထဲတဲသွားထိုးပြီး တောင်းဆို
တော့မှာပေါ့။ အဆိုးဆုံးကတော့မြောက်ပေးနေတဲ့ ကောင်တွေပဲ။ ဒီမိုကရေစီကိုခုတုံးလုပ်ပြီး
နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်လာမှ ဖျာခင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကြောင့်မတည်မငြိမ်တွေ
ဒလန်တွေမွေးနေတယ်ပြောကြအော်ကြတဲ့သူတွေ ရှိပါအုံးမယ်။ ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်ကြပါစေ။
အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု
ထိုင်း အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ငန်းရှင်များကို သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားသည့်စနစ်အား ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ပြန်လည် ထည့်သွင်း
တနိုင်းမှ မြစ်ကြီးနား ထောင်သို့ ပို့သည့် အကျဉ်းသား တချို့ ထွက်ပြေး
အလုပ်သမားများထံမှ ၀န်ဆောင်ခမယူရန် သတ်မှတ်ချက် အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီများ ဝေဖန်
အက်ဆစ်နှင့်ပက်ခံရမှု အမြန်ဆုံး တရားစီရင်ပေးရန် အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှားသူများ တောင်းဆို
မိတ္ထီလာ ရဲစခန်းမှူးနှင့် အမှုစစ် ရဲအုပ်ကို လာဘ်စားမှုဖြင့် အရေးယူ
Sule Square စီမံကိန်း မြို့တော်စည်ပင်နှင့် ညှိနှိုင်းနေရဆဲ